ချစ်ကြည်အေး: ပျော်စရာမွေးနေ့ ကိုယ့်အတွက်....
အမိဝမ်းမှ ကျွတ်ကတည်းက တနှစ်ပြည့်တိုင်း ပြည့်တိုင်း မိုင်တိုင်လေးတတိုင် မှန်မှန် စိုက်ထူခဲ့မည် ဆိုလျှင် ယနေ့ အလားတူ မိုင်တိုင် တတိုင်ကို စိုက်ထူရမှာ ဖြစ်ပေသည်။ ထိုမိုင်တိုင်ကလေးများသည် တခုနှင့်တခု အကွာအဝေးချင်း တူညီကြသော်လည်း တချို့မှာ ဝေဝေဝါးဝါး၊ တချို့မှာ ယခုတိုင် သစ်လွင်ဆဲ၊ တချို့မှာမူ ကျိုးပဲ့ကြေလွင့်လျှက်ပင် ရှိနေကြပေပြီ။
ဘလား ဘလား ဘလား ဘလား ဘလား ဘလား ဘလား ဘလား
X X X x X X X X x X X X x X X X x.............
တကယ်ဆိုရင် မွေးနေ့ပို့စ်ကို အဲသလို ခန့်ငြားထည်ဝါစွာ တွေးပြီး ရေးပစ်လိုက်ချင်တာပါ။
ရှေ့စိတ်ကို နောက်စိတ်က အစားထိုးရင်း ချက်ချင်းငြင်းဆန်ပြီး အဲသလို ခန့်ခန့် ထည်ထည် မရေးချင်ဘူး....ဖြစ်သွားတယ်...ပြီးတော့ Happy Birthday2ME လို့ ကောက်ခါငင်ခါ အဲသလို အော်ဆိုဖြစ်သွားတယ်....။ စိတ်ထဲမှာ ဆိုတာ ပြောပါတယ်...။
သိသားပဲ....တိုးတိုးတမျိုး ကျယ်ကျယ်တဖုံ ကြွက်စီကြွက်စီ တနည်းနဲ့ မွေးနေ့မှာ ဘာကမှ မကျွေးတော့ဘူးလားလို့ ....တီးတိုး တီးတိုး သဖန်းပိုး အတွေးထဲမှာ ထိုးနေကြတယ် မဟုတ်လား....?
လာမယ်လေ...ကျွေးရမှာပေါ့၊ ခက်တာက ပုံတွေတင်ပြီး မကျွေးချင်ဘူး...
တကယ်ပါ အပီကျွေးချင်ပါတယ် အိမ်ကိုသာ လာခဲ့ကြပါ...
အဲ ခေတ်မီအောင်တော့ Terms and Conditions လေး ထားလိုက်ချင်ပါတယ်
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး လူရိုသေ ရှင်ရိုသေပေါ့....
နှစ်ခုထဲ...နှစ်ခုထဲ...အဲဒါလေး အိုခေတယ်ဆိုရင် ရပါပြီ...
နံပါတ်တစ် ) လက်ဆောင်မပါ ရှက်စရာ......တဲ့
နံပါတ်နှစ် ) လက်ဆောင်ဖိုးနဲ အရှက်ကွဲ......တဲ့
ကိုင်း အဲသဟာလေး သဘောတူရင် ရပါပြီ...အားလုံးကို ဖိတ်ပါတယ်.....
ပုံ / အိမ်ကစောင့်နေသူ
Hmoo Thu Mar 25, 06:14:00 AM GMT+8
Birthday kiss....ပလွတ်.... :D
အပြုံးပန်း Thu Mar 25, 07:06:00 AM GMT+8
Happy Birthday par Ma!
ဖယောင်းတိုင် ဘယ်နှစ်တိုင် ထွန်းမှာလဲ၊ ကိတ်မုန့်ပေါ်မှာ ပြောတာ။
သက်ဝေ Thu Mar 25, 07:14:00 AM GMT+8
Happy birthday ပါ သူငယ်ချင်း
T & C ကြည့်ပြီး နဲနဲလေသွားလို့...
ကိုယ့်ပိုစ့်ထဲမှာ တခုခုရေးထားတယ်... လာကြည့်လှည့်အုံး...း))
ယောနက်သန် Thu Mar 25, 08:07:00 AM GMT+8
ဝက်ဝံလေး Thu Mar 25, 08:16:00 AM GMT+8
♫♪ ♫♪Happy Birthday to you
Happy Birthday to you ♫♪ ♫♪
Happy Birthday to you, Ma Chit ♫♪ ♫♪
ဟားးးးးးးးး လာပေါသွားပါတယ်နော် ဟိ
အိုခေ အိမ်လာစေချင်ရင် လေယဉ်လက်မှတ်ပို့လိုက် ဒါဗြဲ တာ့တာ ဘိုင်
WWKM Thu Mar 25, 08:38:00 AM GMT+8
HAPPY BIRTHDAY Par Ma, ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪
Anonymous Thu Mar 25, 08:51:00 AM GMT+8
May you celebrate your birthdays together with your loved ones for many many years!!!!
Anonymous Thu Mar 25, 09:14:00 AM GMT+8
အင်ကြင်းသန့် Thu Mar 25, 09:16:00 AM GMT+8
မမရေ...Very very happy birthday!!! ပါနော်...ဒီနေ့ ဒီရက်မှသည် နောင်သက်ထက်ဆုံးအထိ မမရဲ့ မွေးနေ့တွေတိုင်းမှာ မမရဲ့ ချစ်ချစ်နဲ့ အတူတူ မခွဲမခွာ အမြဲထာဝရ တူဆင်နွှဲသွားနိုင်ပါစေလို့....
♥ကိုဇော်♥ Thu Mar 25, 09:22:00 AM GMT+8
Happy Birthday to ပါ ချစ်မကြီး....
ဟိဟိ...မနေ့က ကတည်းက ခိုးဖတ်ပြီးသွားပြီ...
လက်ဆောင်တွေ ပိုက်ပြီး ချစ်မကြီး ဆီ လာချင်ပါတယ်။
Vista Thu Mar 25, 09:24:00 AM GMT+8
ံHappy Birthday MAMA Chit!!
T & C ကတော့ကြောက်စာပါလား ... ဒါမျိုးတွေတော်လို့ လည်း
အဖြူကောင်တွေ ချီးမွမ်းတာခံရတာကိုး ဘဘောပေါက်လိုက်ပါဘီလေ..
Thant Thu Mar 25, 09:25:00 AM GMT+8
အိမ်ကစောင့်နေသူ တဲ့.... ဟိဟိ..တကယ်လာခဲ့မယ်...လက်ဆောင်တော့အကြွေးမှတ်..... Happy Birthday !!!
sonata-cantata Thu Mar 25, 09:51:00 AM GMT+8
P.Ti Thu Mar 25, 10:11:00 AM GMT+8
မတရားတဲ့ T&C တွေကို လက်မခံပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် မွေးနေ့ကို မလာနိုင်ပါကြောင်း... ဟိဟိ
ဒဏ္ဍာရီ Thu Mar 25, 10:17:00 AM GMT+8
T&C အတိုင်း လက်ဆောင်ကြီးကြီး နဲ့ တန်ဘိုးကြီးကြီး လာပေးတယ်နော် အမ။း))
လုလု Thu Mar 25, 10:29:00 AM GMT+8
အိမ်ကစောင့်နေတဲ့သူဆီ လာချင်ပေမယ့် လင်ပျံလက်မှတ်ချိဝူး။ ၀ယ်ပေးလိုက်နော်။ လာခဲ့မယ်။ လက်ဆောင်က တန်ဖိုးကြီးကြီးပေါ့ :P
မောင်ဘကြိုင် Thu Mar 25, 11:16:00 AM GMT+8
ပျော်ရွှင်တဲ့မွေးနေ့လေးကစလို့ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်ချစ်ကြီးနဲ့အတူ ဘဝလမ်းအတူလျှောက်လှမ်း ပြီး သာယာအေးချမ်းတဲ့ မိသားစုလေးကို တည်ဆောက်နိုင်ပါစေဗျာ
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Thu Mar 25, 11:17:00 AM GMT+8
သဒ္ဓါလှိုင်း Thu Mar 25, 11:39:00 AM GMT+8
Happy Birthday ပါ....။
မွေးနေ့မှစပြီးချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့မခွဲမခွါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီးလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ..။မွေးနေ့ကိတ်ကိုတော့ စိတ်ကူးထဲမှာပဲစားလိုက်တော့တယ်။မမချစ်အတွက်လက်ဆောင်
Rita Thu Mar 25, 11:41:00 AM GMT+8
puluque Thu Mar 25, 12:31:00 PM GMT+8
ဟတ်ပီ ဘတ်ဒေးပါ မမ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗျာာာာာာာာာာာ။
ဘာကျွေးမှာလဲဟင်။ လူရင်းတွေပဲ T & C ကို နည်းနည်းလေး ပြင်ပေးနိုင်မလား....
သက်တန့်ချို Thu Mar 25, 01:20:00 PM GMT+8
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ သူငယ်ချင်းရေ...။
*****Happy Birthday !!!! ******
မောင်မိုး Thu Mar 25, 01:56:00 PM GMT+8
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေဗျာ။ အခုတော့ လာမစားနိုင်သေးဘူး။ ထုံးတို့ထားလိုက်မယ်။ ကြုံတဲ့အခါ အကြွေးပြန်စားမယ်။
အောင်သာငယ် Thu Mar 25, 03:15:00 PM GMT+8
ကိုယ့် ညီမနဲ့ မွေးလချင်း တူနေပါပေါ့လား...
၃၈ ကြိမ်မြောက်တော့ ဖြစ်ရမယ်... အနည်းဆုံး...း))
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ...
Kay Thu Mar 25, 03:23:00 PM GMT+8
ဟဟ..ကိုကြီးကျောက် နဲ့ ကိုအောာင်သာငယ် ကွန်မန့် ဖတ်ပြီး..အော်ရီသွားတယ်
အိမ်အထိ လိုက်လာမှာ...ကျမတို့ ကျောက်ခဲ အုပ်ကို တ၀ိုင်းကျွေး
သူကြီး Thu Mar 25, 03:31:00 PM GMT+8
Anonymous Thu Mar 25, 03:54:00 PM GMT+8
အသက်ရာကျော် အဖွားကြီး ဖြစ်ထိ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာ ဘလော့ဂင်း နိုင်ပါစေ။
Nge Naing Thu Mar 25, 04:10:00 PM GMT+8
ံHappy Birthday to you!!!
မွေးနေ့နှစ်တရာတိုင်အောင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းရပါစေ။
Anonymous Thu Mar 25, 04:39:00 PM GMT+8
ဟူး ဒေါ်မယ်ချစ်ရယ် တော်သေးတာပေါ့ ဖိတ်စာနှင့်တကွ တက်ရောက်ပါရန်လို့ ရေးမထားလို့ ဘာမှမပြောလည်းရိုသေပြီးသားပါရှင့်
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း ရာကျော်အထိ ချစ်သောသူနဲ့အတူနေပြီး၍ ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် သူတော်ကောင်းတရားများ ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ပြီး စာတွေများများကြီးရေးပေးနိုင်ပါစေ
shwezinu Thu Mar 25, 05:15:00 PM GMT+8
Anonymous Thu Mar 25, 06:05:00 PM GMT+8
မြသွေးနီ Thu Mar 25, 07:50:00 PM GMT+8
ဘယ်ရမလည်း မှီရာကားနဲ့ အပြေးလာခဲ့ရတာပေါ့။
wISH yOU mANY hAPPY rETURND oF tHE dAYS.
mks Thu Mar 25, 08:12:00 PM GMT+8
ဟက်ပီး ဘတ်ဒေး ပါ မချစ် ..
ဇွန်မိုးစက် Thu Mar 25, 08:21:00 PM GMT+8
မွေးနေ့မှာ ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုတာ ယုံပါတယ် မမရေ။း)
ဟက်ပီဘတ်ဒေး မမချစ်ကြည်အေးး)
မေဇင် Thu Mar 25, 10:04:00 PM GMT+8
မွေးနေ့မှစ သက်ဆုံးတိုင် လိုရာဆန္ဒပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
rose of sharon Thu Mar 25, 10:26:00 PM GMT+8
အိမ်လိပ်စာအရင်ပေးပါ... ကျန်တာတွေနောက်မှစဉ်းစားမည် ....... :D
~ဏီလင်းညို~ Thu Mar 25, 11:00:00 PM GMT+8
ဆင်းရဲသားမို့ နောက်ဆုံးမှ (အလုပ်ကပြန်ရောက်မှ) လာရောက်ဆုတောင်းပေးသွားရဘာကြောင်းးးးးးးးးးးးးးး
မြစ်ကျိုးအင်း Thu Mar 25, 11:02:00 PM GMT+8
happy birthday ပါအမရေ
khin oo may Fri Mar 26, 12:02:00 AM GMT+8
ကိုလူထွေး Fri Mar 26, 03:09:00 AM GMT+8
YADHTRIB YPPAH !!!
နိုင်ငံခြား ဘာသာစကားနဲ့ နှုတ်ဆက်သွားပါတယ်...
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Fri Mar 26, 11:00:00 AM GMT+8
မွေးနေ့ မှာ ကျန်းမာပါစေ
ကျန်းမာပါစေ - - -
Snow Fri Mar 26, 12:22:00 PM GMT+8
ထောပတ်သီး Fri Mar 26, 02:06:00 PM GMT+8
ur blog is one of my favourite blog.
pandora Sat Mar 27, 12:47:00 AM GMT+8
လက်ဆောင်မပါပဲ မွေးနေ့ကို နောက်ကျဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။
အခုလိုပဲ အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ မချစ်ကြည်အေး။ :)